Arakaraky ny ady sy ny fahasahiranana no tokony hiraisana betsaka amin’Andriamanitra. Ny zava-miseho sy ny toe-javatra sarotra eo amin’ny fiainana dia tsy tokony ho vato-misakana hahatonga antsika tsy hivavaka. Mifanohitra amin’izany no atao, arakaraka ny mahamafy ny ady no tokony hanatonantsika an’Andriamanitra.
Matoa tsy mahomby ny fitoriana ny filazantsara dia satria be teny sy resaka loatra ny olona. Tsy afaka mamoaka ny filazantsara eo amin’ny fiainany izy. Araka ny fanadihadiana, ny zavatra izay tena voaray sy voatazona indrindra dia ireo izay hitan’ny maso. Toy izany mihintsy ny fijoroana vavolombelona, 49% ny zavatra voarain’ny olona niova fo dia vokatry ny hateraky ny fiainantsika andavan’andro izay hitan'ny masony no nahatonga izany.
Matoa tsy mety miova fo ny olona izay ao antranontsika dia ny fiainantsika izay milaza fa Kristiana mihintsy no tsy mandeha. Be resaka foana matetika ka mampadilo ny sofin’ny vaditsika sy ny manodidina antsika (tonga indray ny “mibebaha ianareo!” …). Ilay fiainana mihintsy no tsy tena manambara ny filazantsara.
Eto dia hiresaka ity fivavahana Kristiana ity isika ary eo indrindra no olana.
Betsaka isika no miteny an’ity Jesosy ity kanefa tsy fantatsika tsara Izy. Teo amin’ny 3 taona ihany Jesosy no tena niasa tety ambonin’ny tany, ka ireo mpianatra izay teo aminy isan’andro no tena nahita ny fiainany ary nandray ny fampianarana.
Sahirana ny Jiosy ka tsy nanaiky an’i Jesosy satria betsaka ny zavatra izay tsy fantany momban’i Jesosy. Ahoana izany olombelona ve dia atao hoe Andriamanitra, mamela heloka izany?
- Iza marina moa ity Jesosy ity?
- Inona no antony nahatongavany teto an-tany?
- Ary rehefa lasa Izy, dia ahoana ny aminy?
Ny tsy fahalalantsika an’i Jesosy Kristy no mahatonga ny fijoroana vavolombelona tsy mety sy ny tsy mampamandeha ny fitoriana ny filazantsara. Amin’izao vanin’andro iainantsika izao dia tsy mpanaradia an’i Jesosy mihintsy isika. Ireo mpianatra niaraka taminy nandritra ny 3 taona teo ho eo no niara-dia tamin’i Jesosy, fa rehefa maty Izy dia tsy izany intsony.
Ny tena olana dia Jesosy sy ny fivavahana Kristiana no tsy fantatry ny olona. Ka izany no mahatonga azy ireo sahirana foana rehefa mihatrika ady maro samihafa. Tsy rehefa miditra any am-piangonana sy manaraka ny fotoana any amin’ny fikambanana akory dia izay no izy.
Misy vela-pandrika izay nataon’ny devoly ho an’ny Kristiana ary ny zava-doza dia tsy mahatsiaro tena izy ireo fa voafandrika. Vokany dia hitantsika ireo korontana, ireo ratsy fitondran-tena sy ireo fiainan’ireo Kristiana maro.
Fetsy ny Devoly ary hitany isika fa mazoto mivavaka ka dia avelany hiditra ao ampiangonana. Fa ao indrindra isika no fandriany ka tsy mahatsiaro tena mihintsy satria tafiditra ao anatin’ny tota ny fiangonana sy ny fikambanana (…)
- Misy ireo mitsoka kiriorioka ao am-piangonana satria tsy tiany ny toriteny ataon’ilay Mpanompon’Andriamanitra.
- Eo ihany koa ireo mpitondra isan-karazany ao amin’ny fiangonana na fikambanana manao zoma mahafinaritra miaraka amin’ny zava-pisotro mahamamo.
- Ireo korontana maro any amin’ny fiangonana sy ny fikambanana. (…).
Vela-pandrika ataon’ny Devoly izany ary ny tena zava-doza dia betsaka isika no tsy mahatsiaro tena mihintsy. Mbola mihevitra fa mandeha ihany izy ity dia faly ao anatin’ny fandrika (tota). Tafiditra ao amin’ny fahasahiranana, ao anatin’ny adalàna, ary ny tena zava-doza, dia ho any amin’ny fahaverezana kanefa mbola tsy mahatsiaro saina ihany. Avelan’ny Devoly hivavaka fa tsy avelany hitombo sy hihetsika lavitra.
Ny vela-pandrika izay haseho antsika ihany koa dia isika izay voafehin’ny atokom-pivavahana, na voafehin’ny fombafomba, na voafehin’ny fihetsiketsehana ivelany ary indrindra indrindra tsy mahalala ny anjara toerana misy azy ny olona amin’ny maha-ratsam-batan’i Kristy azy.
Ny tanjona izay kendren’Andriamanitra dia
- ny hanitatra ny ambaindain’ny fanjakan’Andriamanitra,
- mba hiara-miasa daholo ny Kristiana rehetra na aiza na aiza no misy azy, izany hoe Fanahy iray no tokony hiasa ao.
- tsy tokony hisy mihintsy ny fifankahalana fa mifanome-tànana, mifanampy sy miara-miasa,
- zarazaraina ny asa sy ny fanompoana.
Voafandrika manomboka any amin’ny mpitondra ka hatramin’ny Kristiana tsotra. Ireo zavatra hitatsika amin’izao fotoana izao, any amnin’ny fikambanana, ny fiangonana,ny firenena, ireo dia efa vokatr’ireo vela-pandrika ireo.
Fotoana fandinihan-tena izao ary tokony ho fantatrao tsara izay toerana misy anao araka ny Tenin’Andriamanitra. Inona no toerako eo amin’ny maha-Kristiana ahy?
Noho izany dia mila mivoaka ao anaty fandrika isika raha tiantsika ny handova ny fiainana mandrakizay. Ny tena sarotra eo amin’ny fitsaboana dia rehefa misy olona marary kanefa tsy mahatsiaro tena fa maharary. Izany indrindra no mahasarotra ny mitory ny filazantsara amin’izao vanin’andro iainantsika izao, aleo mitory ny filazantsara eo amin’ireo olona izay mbola tsy naheno sy toerana tsy mbola kristianina ireny, toy izay mitory eo amin’ny olona ao anaty fandrika, ianao indray no lazainy fa tsy tonga saina kanefa izy ireo efa mivezivezy ao anaty tota fotsiny.
Inona marina moa izany no tena nahatongavan’i Jesosy ?
Ahoana no ahazoana mamoaka ilay fiainana mitondra ny filazantsara? Ahoana no ahafahana manome ilay 49% ny fitondran-tena ihany dia efa miteny.
Ny vinan’ity fikambanana GBPE ity dia ny fitondran-tena. Ary izahay dia efa milaza mihintsy ho an’ireny mpitondra ny fikambanana any amin’ireny toerana maro samihafa ireny mba hitandrina tsara ny fitondran-tenany. Satria ny vinan’ity fikambanana ity dia ny “mitondra ny filazan-tsara amin’ny alalan’ny fitondran-tena”.
Koa rehefa mitsidika ireny toerana ireny izahay ka indro ianareo mano zavatra mifanohitra ny filazan-tsara dia miala tsiny fa hihatrika “conseil de discipline spirituel” ianareo. Fa maninona tsy manome ilay vina satria manjary mifanohitra ilay fikambanana sy ny fitondran-tena.
Amin’ity fikambanana ity dia manomboka amin’ny mpitondra aloha. Izaho raha nanangana ny fikambanana dia nangataka tamin’Andriamanitra mihintsy mba hifanaraka amin’ny Tenin’Andriamanitra ny fiainako na aiza na aiza. Mba ho sahy mijoro amin’izany fitondran-tena izany isika.
Ahoana no ahafahana mijoro vavolombelona eo amin’ny asa aman-draharaha sy amin’ny fitondran-tena? Tsy amin’ny teny fa amin’ny asa, satria ny teny samy mahay avokoa fa eo amin’ny fiainana!
Ary eo no ilaina fahasahiana, hoy Paoly ao amin’ny 1Korintiana 4:16 hoe “Koa mananatra anareo aho: manahafa ahy hianareo”. Milafahasahiana ny mijoro vavolombelona ao an-tokantrano.
Mba sahia miteny hoe “izaho mba jerenareo rankizy a!” fa tsy miteny hoe “aza mifoka sigara re!”, na “aza mandainga”, kanefa maniraka ny mpitantsoratra handainga ianao ataovy hoe tsy eo izy”, kanefa ianao milaza fa mandeha amin’ny fahamarinana. Misy zavatra tsy mandeha ao.
Ny olona ilaina amin’izao fotoana izao dia:
- Olona miaina amin’ny filazantsara fa tsy olona mahay ny filazantsara
- Olona miara-miaina amin’I Jesosy fa tsy olona mahalala an’I Jesosy
Jesosy asandratra ho Mpanjaka:
- Raha mpanjakanao Jesosy dia inona no dikany izany eo aminao?
- Mitondra ny fanjakany ao anatin’ny fiainanao ve Izy?
- Tompon’ny fahefana eo amin’ny fiainanao rehetra ve Jesosy? Eo amin’ny hoavinao? Eo amin’ny fikasanao? Eo amin’ny fanananao? Eo amin’ireo zavatra izay jeren’ny masonao? (…) marina ve izany?
- Mitondra inona amin’ny fiainanao izany Jesosy Mpamonjy izany?
- Mpamonjy anao amin’ny inona? Amin’ny fahotana.
- Tena marina ve izany eo amin’ny fiainanao sa mbola gejain’ny filàna ianao?
Romana 8:1-4 “Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Fa ao amin'i Kristy ny lalàn'ny Fanahin'aina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria nofo ny nahalemy azy, dia vitan'Andriamanitra tamin'Izy naniraka ny Zanany, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo, fa araka ny Fanahy.”
1. Iza marina moa ity Jesosy ity ?
Andriamanitra tonga nofo Jesosy
Betsaka ny olona no sahirana eto. Ny nofo no nahalemy azy ary ny nofo ihany no nanapotehina azy. Io nofo hanapotehana azy io dia tsy vitan’ny olombelona mihintsy fa tsy maintsy Andriamanitra nofonosina nofo dia tonga Jesosy, vaksiny miaro amin’ny ota izy io.
Rehefa misy olona atao vaksiny dia izay otrik’aretina iny ihany no alaina anamboarina vaksiny hanasitranana azy.
Koa satria ny nofo no nahalemy ny olona dia tsy maintsy ny nofo ihany no hanaovana ny vaksiny antsika. Tsy mahazaka an’io mihintsy ny olona na dia ny mpaminany aza. Fa Andriamanitra ihany no mahavita izany.
Andriamanitra nofonosina nofo no tonga Jesosy. Ilay nofo no zanak’Andriamanitra. Tsy mba tamin’ny firaisan’ny olona no nahatonga an’i Jesosy tao anatin’ny kibon’i Maria. Manomboka eto ny asa mahagaga an’Andriamanitra.
Tsy mitovy karazana ràn’olona mihintsy ny karazan’ny Ràn’i Jesosy.
Manana hery io Ràn’I Jesosy Kristy io. Ilay olona nandefona an’i Jesosy raha vao nipitihan’ny Ràn’i Jesosy dia niova fo, teo vao niaiky.
Indraindray isika maheno tsara ilay Teny hoe “fa na dia ny zanaka aza tsy mahalala ny fiavian’ny Tompo”, tsy Jesosy mihintsy no lazainy eto fa ilay nofo no tsy mahalala fa tsy ilay Andriamanitra tao anatiny akory.
Genesisy 3:6 “Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahahendry, dia nanotazany ny voany ka nihinanany; ary nomeny koa ny vadiny; ka dia nihinana izy.”
Diniho fa zavatry ny nofo daholo ireo :
- Tsara ho fihinana ny hazo
- Mahafinaritra ny maso.
- Hazo mahatsiriritra
Filan’ny nofo daholo ireo ary tsy maintsy ho ny nofo ihany no nentina hanapotenina izany. Tsy zava-panahy no nahalatsaka ny olona fa ny zavatry ny nofo.
2. Inona no antony nahatongavany teto an-tany?
Hanapotika ny filàn’ny nofo no nahatongavan’i Jesosy
Hanapotika io filàn’ny nofo io, ilay hoe voahombo miaraka amin’i Kristy.
Galatiana 2:20 “Voahombo miaraka amin’ i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’ Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy.”
Raha tonga tety ambonin’ny tany io Jesosy io dia olombelona tahaka antsika izy raha ny vatana fa ny Ràny kosa dia tsy mitovy amin’ny ràntsika.
Jaona 8:46 “Iza moa aminareo no mampiseho Ahy ho nanota?”
Tsy nanota ary tsy voakasiky ny ota fa ny hanapotika ny ota, ny filàn’ny nofo mba hahatonga ny olona hanana ny fiainana vaovao.
3 taona ihany no nifamezivezen’ny Tompo ka rehefa vita izany dia niakatra any an-danitra Izy.
Rehefa nandeha Jesosy dia jereo ny fivavahana.
Nisy nihaona tamiko ireo mpianatra teolojia ireo ary dia nilaza izy ireo fa tsy ilaina intsony ny manao fihezahana fa efa vitan’i Jesosy ny famonjena, tsy mety ny ataonareo miady amin’ny faka-panahy satria efa vitan’i Jesosy ny famonjena. Ny finoana fotsiny fa vita ny famonjena dia ampy izay.
Diniho izany fampianarana izany . Kanefa raha jerena ny toetrany tsy mandeha araka ny tokony ho izy akory kanefa dia milaza fa olona voavonjy. Misy aza rehefa alahady tsy mandeha mivavaka akory fa lasa mampiady akoho.
Indray alahady izahay nandeha nanao tafika masina tamin’ny toerana iray, raha nitady ilay mpitondra fivavahana izahay dia natoron’ny olona fa iry manao “arbitre” iry izy.
Azo atao daholo ve ny zavatra rehetra satria efa vita ny famonjena?
Izany no fandrika izay ataon’ny devoly amin’ny Kristiana.
3. Ary rehefa lasa Izy, dia ahoana ny aminy?
Rehefa lasa Jesosy dia nandefa ny Fanahy Masina Izy.
Rehefa miresaka izany ny ato anatin’ny Baiboly hoe: Jesosy Kristy, Andriamanitra, ny Fanahy Masina ary ny Teny dia iray ireo ary tsy maintsy miaraka fa tsy azo saratsarahana .
Ireo izany no napetrak’Andriamanitra hanaovana ny asa maha-Kristiana antsika.
Jaona 15:26 “Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin'ny Ray, dia ny Fanahin'ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin'ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy.”
Raha handray ny famonjena isika, dia inona no zavatra tsy maintsy tokony ho fantatsika?
Ny atao hoe olona voavonjy dia
-Olona mino ny asam-pamonjena
- Olona mandray ireo zavatra 4 voalaza ireo : Andriamanitra, Jesosy Kristy, ny Teny ary ny Fanahy Masina. Ka ireo no miasa
Ary ny atao hoe Kristina dia izay rehetra nandray Azy ireo. Manomboka miditra ao anatitsika amin’izay ireo ho tonga fiainana.
Rehefa lasa izany ity Jesosy ity dia miditra ao anatin’ny fiainan’ny olona amin’izay Izy fa tsy eo akaiky intsony. Tsy aiza akory ny Fanahy Masina fa ao aminareo ary ao anatinareo.
Jaona 14:17 “…ny Fanahin'ny fahamarinana, Izay tsy azon'izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo aminareo Izy, ary hoao anatinareo.”
Olona voavonjy izany dia nidiran’I Jesosy ny fiainany.
Tamin’i Jesosy tety ambonin’ny tany, rehefa niditra tao an-tranon’i Zakaiosy Jesosy dia inona no zavatra nitranga?
Niova tanteraka ny fiainany. Ilay tena zavatra tian’i Zakaiosy dia nendahina, namoaka ilay vola nafeniny mihintsy aza izy.
Lioka 19:5-6/8 “Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiantrano Azy sady faly…. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe: Indro, Tompoko, ny antsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo; ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana, dia honerako avy efatra heny izany.”
Tamin’ny andron’i Jesosy tety ambonin’ny tany io! Ary izay toerana rehetra nadalovany dia nisy ny fiovana izay hita maso.
Ary amin’izao fotoantsika izao kosa dia tsy Jesosy intsony no hita maso fa ilay Andriamanitra, ilay Jesosy, ilay Teny, ilay Fanahy Masina no miditra ao anatin’ny olona, ao anatitsika ao ka manova ihany koa ny toetratsika, izay no atao hoe Kristiana. Aza miheritreritra fa voavonjy mihintsy raha tsy izay no misy.
Ary izay no hahafahantsika mijoro vavolombelona eo amin’ny fiainantsika. Tsy zavatra tantaraina io fa ny olona manodidina antsika no mahita fa tena niova isika . Tsy mila miresaka io, fa izany no ateraky ny fidiran’I Jesosy ao anaty ary ahafantarana fa tena tafiditra tokoa Jesosy.
Raha mbola tsy mahita fiovana eo amintsika ny zanaka, ny vady, ny mpiara-miasa dia mbola tsy tonga ao izany Jesosy.
Io fiovana io no ahafahana milaza hoe mitondra an’i Jesosy eo amin’ny fiainako. Miova ny fomba fiteny, ny fomba fanao.
Ary eo no tena ahafantarana fa tena tafiditra tokoa Jesosy. Io fiovana io no entina amin’ny fiainana manontolo, tsy manamboamboatra fa ampitomboana amin’ny alalan’ny fitokiana ny Tenin’Andriamanitra.
Tsy hoe hafa ny toetrako ato an-trano dia hafa ihany koa ny fiainako any am-piasana. Tsy izany mihintsy, fa fiainana io ary izany no Jesosy midita ao anaty.
Manova zavatra betsaka eo amin’ny fiainana io Jesosy ao anaty io. Raha nisy zavatra tsy nety nataonao dia sitranin’i Jesosy. Tsy mila mangataka izany ianao fa Jesosy tonga ao anatinao dia manova zavatra betsaka eo amin’ny fiainanao.
Izany no ilaintsika amin’izao fotoan-tsarotra andalovantsika izao. Raha ao anatin’ny fiainanao Jesosy dia ao anatin’izany paradisa ianao. Ny olona manana an’i Jesosy dia tafiditra ao anatin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Ao anatin’ny tsy fanananao asa no anaporofoinao ny Tenin’Andriamanitra. Eo no ahitanao sy hanaporofoan’Andriamnitra anao manoatra noho ny voromanidina ianao.
Raha tsy misy ny aretina, aiza no anaporofoin’Andriamanitra fa manasitrana Izy? Tsarovy ny toriteny izay efa henontsika dia ampiharo eo amin’ny fiainana.
Ny Tenin’Andriamanitra dia ampy hiatrehanao ny ady. Hilaina ampiasaina sy iainana ny Teny voarainao. Tsy miova io Tenin’Andriamanitra io!
Raha tsy misy ny sakana, ahoana no hanaporofoin’Andriamanitra ny Teniny aminao? Ary asehon’Andriamanitra ihany koa ireny mba hahitana izay mampihatra ny Teny eo amin’ny fiainana.
IMpanjaka 17:14 “Fa izao no lazain'i Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely: Tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika, ary tsy ho ritra ny diloilo ao amin'ny tavoara mandra-pihavin'ny andro handatsahan'i Jehovah ranonorana amin'ny tany.”
Manompoa an’i Jehovah, amparitaho ny filazantsara fa hain’ny Tompo ny mitantana ny fiainanao. Tsy mangataka, tsy miteny fa indro Andriamanitra no manome.
Raha izany foana no ho eritreretinao dia rehefa tsy misy sakafo andrahoana ao aminao ao, dia tsy handeha hitory Teny iahao fa lasa mandeha mitady.
Ny olana dia hainao Jesosy sy fantatrao Jesosy ary hinoanao fa misy fa tsy tafiditra ao amin’ny fiainanao Izy.
Indro mandondona eo am-baravarana raha misy mihaino ny feoko dia hiditra ao aminy Aho. Manova zavatra io fidiran’I Jesosy io.
Raha Jesosy tokoa no ao anatinao ao dia Izy no mihatrika olana fa tsy ianao. Koa raha azonao tsara izany dia tsy hosahirana ianao.
Fa nahoana ianao no sahirana? Satria ianao no mihatrika ny olana. Tsy marina ny hazofijaliana, tsy marina ny paska raha ianao no sahirana. Maty nisolo antsika anie Jesosy e! Maty nitondra ny olantsika Izy! Koa nahoana ianao indray no mitondra izany androany?
Apetraho eo aminy ny enta-mavesatrao. Mandiniha tena kely aloha sao dia mbola teo akaikiko foana Jesosy hatramin’izay? Fa anio kosa hivavaka hoe midira mihintsy ianao Jesosy eo amin’ny fiainako! Raiso an-tanana ny fiainako!
Manomboka miova eny na ny fandaharan’ny fahita lavitra jerenao aza! Azonao aneritreritra ve fa raha ao anatinao marina Jesosy dia ahoana no fipetrany? Ahoana hoy Izy? Fitiavan’Andriamanitra anao izao toriteny izao.
Raha tena ao aminao marina Jesosy dia rava daholo ny fisarantsarahana, rava ny maha FJKM anao, rava ny maha Loterana anao, rava ny maha GBPE anao (…) fa Jesosy sisa no mipetraka eo aminao.
Raha mbola ny antokom-pivavahana na fikambanana no ifikirinao ao dia mbola tsy ao Jesosy izay. Fa raha rava kosa ireo dia io Jesosy io hiombonantsika amin’izay.
Raha tafiditra ao aminao amin’izay Jesosy dia :
-io maha-ianao anao io no miala voalohany indrindra
- ary Jesosy no mitoetra.
Ary ny Soratra Masina manambara hoe “mba ho iray ihany izy rehetra”, Fanahy iray no miresaka amintsika. Tian’Andriamanitra hofoanana ny fitsitokotokoana.
Fijoroana vavolombelona : Ny sampana GBPE any Toulouse dia ahitana batista maro, adventista maro, pentekotista maro, misy FPMA maro ao izay miaraka mivavaka. Ary ny tena mahavariana dia misy RCF izay ataon’izy ireo ao, misy tsy mihinana kisoa ao fa tsy manaka izany fa samy mahalala dia samy maka. Raha jerena avy aty ivelany dia toy ny ao amin’ny fiangonana iray ireo olona ireo. Tafita tokoa ilay fiombonana, miara-mivavaka izy ao ary samy manana ny azy izy any ivelany any, fa rehefa ao amin’I Kristy izy ireo dia Fanahy iray no ao aminy.
Ary izany fitsitokotokoana izany no tian’Andriamanitra esorina eto amin’ity firenentsika ity.
Raha tena manana firaisana amin’i Kristy isika dia toy ny vatana io; raha may ny afo ny tanana dia tsotsofin’ny vava, raha vao tafitohina ny tongotra dia safosafoin’ny Tanana.
Fa tsy hoe raha misy rahalahy lavo dia hilaza hoe mbola aiza no hahazo anareo, ianareo anie raha mbola tsy manaraka ny Tenin’Andriamanitra dia mbola ho aiza ny hahazo anareo.
Tsy mba izany ny fiainana Kristiana! Mivavaha ho azy ianao dia ampaherezo izy, fa izany no firaisana ao amin’I Kristy. Malahelo ny fonao fa voakasika ny ratsam-batana. Raha faly ny ratsam-batana iray dia miara-paly daholo ary raha ory ny iray dia miarak’ory daholo.
Ataovy tena hiainanao re Jesosy e! Izay vao tanterak ilay 49% amin’ny fitoriana ny filazan-tsara dia ny fitondran-tena ka hampibebaka olona. 1% eo no miova fo vokatr’izao toriteny ataoko izao.
Ny fiainana no tena mitory ny filazan-tsara fa tsy ny fahaizana miteny na ny fahaizana miresaka.
Tsy mihezaka ihany koa fa ny Tompo no ao anatinao ka mitarika anao hahitsy mandrakariva.
Raha tena Kristiana marina ianao dia omeo an’i Jesosy ny fonao manontolo.
Koa rehefa mivavaka ianao dia :
- aza miresaka ireo olanao intsony,
- aza mitaraina intsony.
Fa ovay ny fomba fivavakao:
- Ataovy tsapako fa velona ato amin’ny fiainako Ianao Jesosy o!
- Ataovy ho hitan’ny ankohonako, ho hitan’ny olona manodidiana ahy fa ato anatiko Ianao Jesosy o!”
Izany no tonom-bavaka ataovy, Hoy ny Tompo hoe izay “manome voninahitra Ahy dia omeko voninahitra”.
ISamoela 2:30 “…; fa izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka.”
Manadratra ny Tompo ianao dia Izy hanamarina ny Teniny eo amin’ny fiainanao.